Sida laga soo xigtay Kuo, shixnadaha MacBookga ayaa kori doona mahadnaqa miniLED | Waxaan ka imid mac
Qaar badan ayaa ah wararka xanta ah ee aan si joogto ah u maqalno sababtuna tahay cillad ama mahadnaq farsamada miniLED. Apple ayaa durba ka hirgelisay gudaha iPad Pro laakiin dhammaan adeegsadayaasha iyo falanqeeyayaashu waxay rajaynayaan in tikniyoolajiyadani ay noqon doonto jilaha MacBookga soo socda. Taasi waa sababta Kuo uga digayo haddii ay sidaas tahay, shixnadaha kombiyuutarada si weyn u kori doono, inkasta oo ay weli u taallo.
Kuo wuxuu leeyahay Apple waxay diiradda saareysaa tikniyoolajiyadda miniLEd, si kastaba ha ahaatee istiraatiijiyaddu waa mid dhexdhexaad ah marka loo eego isla markiiba. Sida laga soo xigtay falanqeeyaha, qorshaha Apple waxaa loo qaybin karaa shan waji, oo ay ku jiraan muddada laga bilaabo 2019 illaa 2026. Hadda shirkadda American waa diiradda saaray kala duwanaanshaha halista sahayda iyo yareynta qiimaha tikniyoolajiyadda miniLED. Shirkadda "waxay si firfircoon u raadineysaa alaab -qeybiyeyaasha labaad ee qaybaha muhiimka ah ee Mini LED."
Sannadka soo socda, 2022 laakiin laga yaabee sannadkan sidoo kale, Apple ayaa la filayaa inuu ku daro farsamadan MacBook. Sidan, dhoofinta kombiyuutarku waxay kori doontaa qiyaastii 20% sanadkii. “Si kastaba ha ahaatee, waxaan filaynaa in shixnadaha MacBook ay si weyn u koraan 20% sannad-sannadka, ama ka badan sannadaha 2021 iyo 2022. Sababtoo ah qaadashada korantada Mini LED, Apple Silicon iyo naqshado gebi ahaanba cusub. »
Kuo wuxuu ku celinayaa in MacBooksyada cusub la filayo inay soo bandhigaan guddi miniLED ah, moodel cusub oo ka yimid Apple Silicon, laga yaabee inuu M1X u yahay MacBook Pro iyo M2 oo loogu talagalay MacBook Air sannadka 2022, iyo sidoo kale naqshado gebi ahaanba cusub. Apple waxay ka saari doontaa TouchBar qeybta xigta ee MacBook Pro, waxay ku dari doontaa isku xira MagSafe cusub, waxayna dib u soo celin doontaa dekadaha qaarkood, sida HDMI iyo boosaska kaarka SD.
Waxaan sugi karnaa oo kaliya runtiina uma baahnin inaan sameyno muddo aad u dheer maadaama aan joogno irridaha Sebtember, bil halkaas oo sifooyin badan oo cusubi ka soo bixi karaan, inkasta oo qaarkood aysan u arkin inay caddahay in kombiyuutarada cusub durba la soo bandhigay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida laga soo xigtay Kuo, shixnadaha MacBookga ayaa kori doona mahadnaqa miniLED
AirPods Max: qiimaha ugu hooseeya taariikhda ee Amazon